100+ Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo Kanada ku yaal Shahaadooyin 2022
November 22, 2021 Okpara Francis
100 + Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Kanada oo wata Shahaadooyin
Waxaa Kanada ka jira dhowr koorso oo bilaash ah oo bilaash ah oo Kanada ku yaal oo shahaadooyinku ka go'an yihiin, cilmiga aadanaha, madadaalo, maarayn, qaab dhismeed, bay'ad, ka shaqeynta cuntada iyo inbadan.
Koorsooyinkani waxay u furan yihiin dadka xiiseynaya waxaana inta badan lagu qaadaa internetka Coursera iyo kuwa kale baraha internetka.
Koorsooyinka khadka tooska ah waxaa loo arki karaa inay yihiin kuwa xoojiya xirfadaha markay ku darayaan waxa qofku horey u yaqaanay ama u adeegaya ilaha aqoonta cusub.
Laga soo bilaabo diiwaanka, Kanada waa mid ka mid ah waddamada leh dalabyada ugu sarreeya ee gelitaanka ardayda caalamiga ah. Arday badan oo caalami ah ayaa sanad kasta u soo gala Kanada ujeedooyin tacliimeed laakiin tirada la diido waxay ka badan tahay x3 tirada la aqbalay.
Tan waxaa loola jeedaa in arday badan oo caalami ah oo doonaya inay wax ku bartaan Kanada ay la kulmaan diidmo hal sabab ama mid kaleba.
Koorsooyinka khadka tooska ah waxay ka caawiyeen dad badan inay helaan shahaadooyin faa'iido leh oo khadka tooska ah waana sababta loogu caawinayo ardayda inay helaan koorsooyinka internetka oo leh shahaadooyin bilaash ah oo daabacan oo aan ku qornay hage si ballaaran loo akhriyey koorsooyinka onlaynka ah oo wata shahaadooyin daabacan.
Maqaalkan gaarka ah waxaa sidoo kale ku yaal koorsooyin khadka tooska ah oo wata shahaadooyin dhammaystiran oo Kanada ah oo aad ka heli doonto faa'iido badan.
Ka qayb qaadashada koorso online ah oo ay bixiso jaamacad Canadian ah iyo helitaanka shahaadada la socota koorsada marka la dhammeeyo ka dib waxa la barbar dhigi karaa free Lataliyihii diiwaangelinta ka dib casino oo waxay u noqon kartaa qalbi qaboojin wanaagsan ardayda aan weli u gudbin Kanada. Waxaa jira qaar ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah oo ay bixiso dowladda Kanada kuwaas oo sidoo kale la socda shahaado.
1 10 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo Kanada ah oo wata Shahaadooyin
1.1 Kobcinta Barnaamijka Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah
1.2 Moodooyinka iyo Naqshadeynta koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah
1.3 Koorsooyin Online ah oo bilaash ah oo ku saabsan xirfadaha qorista wanaagsan
1.4 Koorsooyinka khadka tooska ah ee IELTS ee diyaarinta
1.5 Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee xisaabaadka
1.6 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo ku Saabsan Isgaarsiinta Ganacsiga
1.7 Koorso bilaash ah oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan barashada barashada khadka tooska ah
1.8 Koorso Khadka Tooska ah ee Ingiriisiga ah ee Horumarinta
2 Koorsooyinka Dibloomada Tooska ah ee Bilaashka ah ee Kanada
3 Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
3.1 Koorsooyinka khadka tooska ah ee IELTS
3.2 Koorsooyinka khadka tooska ah ee 'GRE' ee internetka lagu diyaariyo
3.3 Koorsooyinka khadka tooska ah ee 'Gmat diyaarinta'
4 Koorsooyinka Jaamacadda ee Bilaashka ah ee Kanada
Ardayda Kanada iyo ardayda caalamiga ah ee degan Kanada waxay ka faa'iidaysan karaan koorsooyinkan si ay u helaan aqoon dheeraad ah oo ay u horumariyaan CV-yadooda.
Waxaa jira dhowr koorsooyin onlayn ah oo adduunka ah. Qaar shahaadooyin wata, qaarna aan haysan. Qaar waa bilaash, qaarna waa la bixiyay. Qaarkood waxay u sameeyeen waddamo gaar ah, qaarna arday kasta oo caalami ah.
Halkan, diiradeydu waxay tahay koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada oo wata shahaadooyin waxaanan kula wadaagi doonaa ilaa toban ka mid ah kuwan.
Koorsooyinkan waxaa bixiya qaar ka mid ah jaamacadahaas aad jeceshahay inaad ka mid noqoto Kanada dhexdeeda waxa ugu xiisaha badan ee kaqeyb qaadashada koorsooyinkanna waa inaad wax ku baran kartaa khadka tooska ah ee gurigaaga oo lagu siin doonaa Shahaado dhammaadka .
10 Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo Kanada ah oo wata Shahaadooyin
Kobcinta Barnaamijka Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah
Moodooyinka iyo Naqshadeynta koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah
Koorsooyin Online ah oo bilaash ah oo ku saabsan xirfadaha qorista wanaagsan
Koorsooyinka khadka tooska ah ee IELTS ee diyaarinta
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee xisaabaadka
Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo ku Saabsan Isgaarsiinta Ganacsiga
Koorsooyinka khadka tooska ah ee injineernimada Software-ka
Koorso bilaash ah oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan barashada barashada khadka tooska ah
Koorso Khadka Tooska ah ee Ingiriisiga ah ee Horumarinta
Sida laga soo xigtay Wikipedia, Soosaarka softiweerku waa habka uur qaadista, cayimida, naqshadeynta, barnaamijyada, diiwaangelinta, tijaabinta, iyo hagaajinta cilladaha ku lug leh sameynta iyo dayactirka codsiyada, qaabdhismeedka, ama waxyaabaha kale ee softiweerka ah.
Koorsooyinka horumarinta barnaamijka waxaa lagu bixiyaa barnaamijka 'Coursera platform'. Codsadeyaashu xitaa waxay heli karaan bachelor ama mastar sayniska kombiyuutarka oo si buuxda u daboolaya horumarinta softiweerka khadka tooska ah ee barnaamijkan.
Iyadoo aan loo baahnayn gelitaan gaar ah, koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada si buuxda ayaa loogu sameeyaa khadka tooska ah iyada oo ay la socoto shahaadadeeda waxayna qaadataa qiyaastii 20 saacadood si loo dhammaystiro.
Koorsadan qaabeynta moodada ah ee khadka tooska ah waxaa laga bixiyaa Brentwood Open Learning College oo isqoristu waxay furantahay sanadka oo dhan taas oo micnaheedu yahay waad dalban kartaa koorsada xitaa hadda.
Koorsooyinkan xirfadaha qorista khadka tooska ah ee bilaashka ah waxaa bixiya dhowr jaamacadood oo sare waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo kaqeybgalayaasha hagaajinta xirfadaha qorista qoraalka, warbixinnada, naxwaha, sheekooyinka, qoritaanka ganacsiga iyo inbadan.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah waxay ka kooban tahay casharo ku saabsan dhageysiga, hadalka, akhriska iyo qorista imtixaanka IELTS.
IELTS waa mid ka mid ah imtixaannada tacliinta ee khasabka ah ee loogu talagalay ardayda ka socota waddamada aan Ingiriisiga ahayn ee doonaya inay wax ku bartaan Kanada, Australia, Mareykanka ama qaar ka mid ah waddamada Ingiriiska.
Koorsadu waa mid dhammaystiran oo iskeed u socota, taas oo u oggolaanaysa ka-qaybgalayaasha inay si casharro leh u qaataan casharro waqtigooda ugu habboon.
Koorsadan xisaabinta bilaashka ah ee bilaashka ah uma baahna shuruudaha gelitaanka hore. Iskeed ayey u socotaa waxayna qaadataa ugu yaraan ilaa 20 saacadood si loo dhammaystiro.
Kani waa koorso gaaban oo wuxuu u furanyahay inuu helo codsiyo kaqeybgalayaasha xiisaynaya sanadka oo dhan.
Koorsadan bilaashka ah waxay qaadataa 10 ilaa 15 saacadood oo keliya in la dhammaystiro waxaana jira qiimeynno oo kaqeybgale kasta oo doonaya inuu ku guuleysto koorsada si qanacsan u helo shahaadada ay tahay inuu dhaliyo 80%
Koorsadan gudaheeda, waxaad ku baran doontaa sida loo xoojiyo farsamooyinka qorista ganacsigaaga loona hagaajiyo awoodahaaga shaqsiyeed iyo soo bandhigid.
Koorsadani waa mid toos ah oo bilaash ah oo aan u ahayn Kanadiyaanka oo keliya laakiin arday kasta oo caalami ah.
Koorsadan waxaa si bilaash ah loogu siiyaa ardayda iyo macallimiinta Golaha Ingiriiska.
Liiskani ma aha mid dhammaystiran, waxaa jira dhowr koorsooyin onlayn ah oo bilaash ah oo ku yaal Kanada iyo waddamada kale ee adduunka.
Liistadayda halkan, waxaan isku dayay intii karaankeyga ah inaan soo koobo alaabtayda Kanada sidaas darteedna inta badan koorsooyinka kor ku xusan waxaa si bilaash ah uga bixiya Jaamacadda British Columbia ee Kanada.
Qaar ka mid ah koorsooyinkan sida waqtiga la sii daayo waxay la socdaan shahaado buuxda ka dib markii dhammaantood lagu dhammeeyo bilaash laakiin markii waqtigu sii socdo, lacag bixinta ayaa looga baahan yahay caddeyn, in kasta oo aaney kulligood ahayn, weli waxaa jira dhowr koorso oo bilaash ah oo Kanada ah oo leh shahaadooyinka aan u baahnayn inaad lacag bixiso intaanad shahaado bixin halkii aad ka dhammaysan lahayd koorsada illaa tan ugu dambaysa.
Koorsooyinka barnaamijka softiweerka ah ee horumarinta iyo injineernimada waxaa bixiya Jaamacadda British Columbia on Coursera iyo shahaadooyinka waxaa laga bixiyaa jaamacadda hoostiisa dhamaadka barnaamijka.
Koorsooyinka Dibloomada Tooska ah ee Bilaashka ah ee Kanada
Si aan u soo gaabiyo sheeko dheer, waxaa jira dhowr koorsooyin diblooma oo khadka tooska ah ah oo Kanada ku yaal laakiin weli ma helin midkood oo bilaash ah. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah koorsooyinka Dibloomada ee khadka tooska ah ee lagu soo bandhigo Kanada.
Dibloomada cilmu-nafsiga iyo latalinta
Diblomaasiyiinta Suuqgeynta Dijital ah
Dibloomada Ganacsiga - Xisaabinta
Dibloomada Waxsoosaarka Video-ga ee khadka tooska ah
Waxaad ka heli kartaa inbadan koorsooyinka dibloomada ee khadka tooska ah ee Canadian-ka ah halkan xiriiriyayaashooda codsigooda.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Hoos waxaa ku yaal koorsooyin toos ah oo bilaash ah oo Kanada ku yaal gaar ahaan ardayda caalamiga ah.
Koorsooyinka khadka tooska ah ee IELTS
Koorsooyinka khadka tooska ah ee 'GRE' ee internetka lagu diyaariyo
Koorsooyinka khadka tooska ah ee 'Gmat diyaarinta'
In kasta oo dhammaan koorsooyinka bilaashka ah ee gaarka ah ee kor ku xusan ay qaadan karaan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba, haddana waxaan dooneynaa inaan si gaar ah ugu nuuxnuuxsanno qaar ka mid ah koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee asal ahaan waxtar u leh ardayda caalamiga ah oo keliya.
Waad ogtahay, inaad wax ku barato Kanada, waxaa lagaa codsaday inaad soo bandhigto natiijo wanaagsan oo IELTS ah sidaa darteed koorsadan waxaa loo tixgeliyey inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ku jira liistada koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee Kanada oo wata shahaadooyin si looga caawiyo ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ka bartaan Kanada laakiin aan ku sameynin dhibco wanaagsan IELTS taas oo keeneysa diidmadooda joogtada ah.
Nidaamka Imtixaanka Caalamiga ah ee Luqadda Ingiriisiga (IELTS) waa imtixaan heer caalami ah oo aqoonta luqadda Ingiriisiga ah oo loogu talagalay dadka ku hadla luqadda Ingiriiska ee aan u dhalan.
Waxaa si wada jir ah u maareeya Golaha Ingiriiska, IDP: IELTS Australia iyo Cambridge Assessment English waana shuruud khasab ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ku bartaan I Canada ilaa kiisaska ay jiraan fursado kale oo qofku dooran karo halkii uu ku soo gudbin lahaa IELTS cert ama goolal.
Waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan koorso bilaash ah oo khadka tooska ah ah oo ku saabsan diyaarinta IELTS halkan.
In kasta oo ay jiraan koorsooyin badan oo khadka tooska ah ee diyaarinta 'GRE' ah oo laga helo Kanada, haddana waxaan xiiseynayaa inaan kugula xiriiro isha.
Imtixaannada Diiwaangelinta Shahaadada (GRE) waa imtixaan la jaangooyay oo ah shuruudaha gelitaanka ee dugsiyo badan oo ka qalin jabiya Mareykanka iyo Kanada. GRE-ga waxaa iska leh oo maamula Maamulka Adeegga Imtixaanka Waxbarashada (ETS).
ETS waa hay'adda rasmiga ah ee mas'uulka ka ah GRE waana awoodaa Halkan guji si aad uhesho tijaabada barashada bilaashka ah ee GRE koorsooyinka iyo ilaha ay bixiso ETS lafteeda.
Imtixaanka Ogolaanshaha Maamulka Qalin-jabinta waa imtixaan la-qabsi ah oo kumbuyuutar ah oo loogu talagalay in lagu qiimeeyo xirfadaha gorfaynta, qorista, tirade, hadalka, iyo akhriska oo ku qoran Ingiriis qoran si loogu isticmaalo gelitaanka barnaamijka maaraynta qalin-jabinta, sida barnaamijka MBA.
GMAT waxaa looga baahan yahay dhowr jaamacadood oo ku yaal Kanada, Mareykanka iyo meelo kale oo badan oo loogu talagalay barnaamijyada qalin-jabinta.
MBA.com waa hay'adda rasmiga ah ee mas'uulka ka ah GMAT waxayna leeyihiin dhowr koorsooyinka GMAT ee bilaashka ah ee Kanada in dhammaan ardayda caalamiga ahi ka heli karaan meel kasta oo adduunka ah.
Koorsooyinka Jaamacadda ee Bilaashka ah ee Kanada
Waxaa jira dhowr koorsooyin jaamacadeed oo bilaash ah oo bilaash ah oo ay bixiyaan jaamacado caalami ah oo kaladuwan oo adduunka oo idil ah laakiin qaybtaan, waxaan diiradda saari doonaa koorsooyinka jaamacadeed ee bilaashka ah ee Kanada gaar ahaan.
Diinosaur Paleobiology koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Waxaa qoray Jaamacadda Alberta, Kanada (Dino 101).
Xogta Barashada Mashiinka koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Waxaa qoray Machadka Sirdoonka Mashiinka Alberta, Kanada.
Naqshadeynta App iyo Horumarinta macruufka koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Waxaa qoray Jaamacadda Toronto, Canada.
Baro Barnaamijka: Aasaaska koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Helitaanka Xogta GIS iyo Naqshadeynta Khariidadda koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Isdhexgalka Cayayaanka-Aadanaha koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Waxaa qoray Jaamacadda Alberta, Kanada.
Dhismaha Barnaamijka koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Hordhaca Khariidaynta GIS koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Bioinformatics dhirta koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Nidaamka softiweerka iyo ku dhaqanka dhaqaaqa koorso jaamacadeed oo bilaash ah oo Kanada ah
Kuwani waxay ka mid yihiin koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin aad ka heli karto Kanada oo ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ay ka dalban karaan meel kasta oo adduunka ah. Hal shay oo ay tahay inaad ogaato inkasta oo ay tahay inay jiraan khidmad ku lifaaqan qaadashada imtixaanka ugu dambeeya iyo helitaanka shahaadada dhammaystirka koorsada.
Arday ahaan, kaqeybqaadashada mid kamid ah koorsooyinkan ayaa lagugula talinayaa. Xitaa haddii aad ogaato in koorsada aad qaadanaysid ay u baahan tahay lacag bixin ka hor inta aan la xaqiijin waad sii socon kartaa oo waad heli kartaa shahaadada haddii aad lacag haysato laakiin haddii aadan haysan, marka hore aqoonta qabso.
Aqoonta ayaa ka muhiimsan shahaado warqad oo keliya. Weli waad ku qori kartaa aqoontii aad ka soo uruurisay koorsooyinka noocan ah adeegsi wanaagsan adigoon haysan shahaado.
Kuwa sida qoto dheer u jecel Kanada, waxaan soo ururiyey liis ah jaamacadaha Kanada oo aan wax lacag ah laga qaadin.
Jaamacadahani waxay u furan yihiin ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba maadaama aysan wax lacag ah ka qaadin wax dalab ah, waxaad ka codsan kartaa gelitaanka qadka tooska ah ee jaamacadahaan dhammaantood bilaash! Kaliya u diyaari dukumintiyadaada qaab PDF ah intaasna wey noqon laheyd.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah maqaalladayada ku saabsan koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee laga yaabo inaad xiiseyneyso;
Jaamacadaha Kanada gudaheeda IELTS la'aan
Iskuulada ku yaal Kanada Lacag La'aan
Sida loo Codsado Jaamacada Kanada
Koorsooyinka Tababarka Kumbuyuutarka ee Khadka Tooska ah
Koorsooyinka Free Online Yale University
Koorsooyin Online ah oo Bilaash ah oo Princeton ah
Koorsooyinka Bilaashka ah ee Ivy League
Xidhiidhka kafaala qaaday wax ku barta internetka
koorsooyinka shahaadada ee canadakoorsooyin bilaash ah oo online ahkoorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah shahaadooyinka kanadakoorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanadakoorsooyin diblooma ah oo bilaash ah oo kanada ahkoorsooyinka internetka ee canada
Previous Post:13-ka Shaqo ee ugu Fudud ee Dawlada oo Si Wanaagsan u Bixiya
Post Next:Jaamacadaha Siiya Ardayda Caalamiga ah Deeqaha waxbarasho
NPSamaratunga wuxuu leeyahay,
May 27, 2021 at 10: am 21
Fadlan ii soo dir daawada bilaashka ah
Koorsada shahaadada internetka ee jaamacadaha Kanada
May 28, 2021 at 5: am 53
Waxaad iska diiwaan gelin kartaa adoo adeegsanaya xiriirka.
Xirfadaha tababarka IT-ga wuxuu leeyahay,
January 27, 2021 at 1: 16 pm
Koorsada Python-ka ee mashiinka barashada mashiinka Xirfada Shaqada, waxaad kuheleysaa faham qoto dheer seddexda nooc ee waaweyn ee algorithms-ka barashada mashiinka, oo ay kujiraan kormeer, kormeerid la'aan, iyo xoojinta barashada.
Neil Patel wuxuu leeyahay,
January 6, 2021 at 8: am 22
Waad ku mahadsantahay wadaagida macluumaadkan
Charles Hilton O wuxuu leeyahay,
October 7, 2020 at 1: am 21
Fadlan miyaad ii soo diri kartaa isku xirka Kanada koorsooyinka bilaashka ah.
Abul Hasan Belal wuxuu leeyahay,
October 4, 2020 at 6: 43 pm
Mudane, waxaan rabaa inaan wax ka barto barnaamijkan barashada elektarooniga ah. Fadlan ii soo dir e-mayl tilmaamo ku saabsan sida koorsooyinka looga baran karo bartaan. Mahadsanid.
Abul Hasan Belal.
Visia wuxuu leeyahay,
September 18, 2020 at 9: 08 pm
Waxa aan shaqada ka maqnaa tan iyo markii uu bilaabmay xidhidhiyaha masiibada Markaa waxaan go'aansaday in anigoo shaqo kale raadinaya, inaan casharo online ah qaato si aan mashquul ugu noqdo. Waxaan xiiseynayaa koorsooyinka Ingiriisiga (dibloma ama shahaadada). Waan ka mahadcelin lahaa haddii ay jiri doonaan fasallo online ah oo lacag la'aan ah ama khidmad yar ayaa noqon doonta ganaax.
Mahadsanid . Nabad galyo
Bajrang sah wuxuu leeyahay,
April 25, 2020 at 6: 29 pm
Xog fiican, Mahadsanid Qoraa. Qoraalkani wuxuu iga dhigay dhammaan hawlahayga oo dhan. Mahadsanid
krishan sharma wuxuu leeyahay,
February 7, 2020 at 4: 00 pm
Waxaan rabaa inaan bilaabo koorsada, fadlan bixi macluumaad dheeraad ah
February 11, 2020 at 6: 07 pm
Eegi doonaa tan. Waxaan ku daabici doonaa natiijooyinkeyga bartan goor dhaw, isha ku hay.
Shahriar wuxuu leeyahay,
July 31, 2019 at 11: 05 pm
Qoraal wanaagsan..Waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga.reallyusefu.